Brookside Loft - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguDonna
Indawo epholileyo, ekhangayo, nesanda kwakhiwa yestudiyo esecaleni komlambo othe cwaka, obhibhidlayo. Hamba uye kwi-balcony yangasese kwaye ungene kule ndawo yokuphumla. Ifakwe kufutshane neendlela zokuhamba kunye nazo zonke izinto eziluncedo edolophini (indawo yokuhlamba impahla, indawo yokutyela, ivenkile, icinema, njl.njl). Yiba namava kwiidolophu zaseSouth Shore ezinembali yaseLunenburg, iMahone Bay kunye neChester kunye neelwandle ezintle kunye nonxweme oluhle, konke kuhambo olufutshane.
E-BrookSide Loft siyabuhlonipha ubumfihlo bakho, ukulunga kunye nokuthuthuzela.
Ukubonisa oku, sikubonelele ngeyakho indawo yokupaka yabucala, indawo yokungena kunye nendawo yeendwendwe egcwele ikhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlala kunye nebhafu.
Iindwendwe zethu zihlala zivakalisa indlela ezinombulelo ngayo kuba “sicinge ngayo yonke into” ukwenza ukuhlala kwabo kube ngamava akhuthazayo.
Ngelixa sibekwe ngobuchwephesha eWileville NS enemithi emininzi kwaye ecaleni komlambo othe cwaka, sihamba umgama ukuya kwivenkile ekwi-Circle K kunye nemizuzu emihlanu ngemoto ukusuka kwiivenkile zegrosari zaseBridgewater NS, iivenkile kunye neendawo zebhanki/zeshishini.
Ngelixa sihlala kulo mhlaba, siyabuqonda kwaye siyabuhlonipha ubumfihlo bakho. Kungenxa yoko le nto siye sayila indawo yethu yokuhlala yeendwendwe eneendawo zokupaka zabucala, izinyuko kunye neendawo zomgangatho. Emva kokuthetha oko, ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo, sinokufikelelwa ngokulula ngetekisi okanye nge-imeyile nangaliphi na ixesha.
Ngelixa sihlala kulo mhlaba, siyabuqonda kwaye siyabuhlonipha ubumfihlo bakho. Kungenxa yoko le nto siye sayila indawo yethu yokuhlala yeendwendwe eneendawo zokupaka zabucala, izin…
Inombolo yomthetho: RYA-2021-04011833463427016-211
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wileville